१.प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले चौथोपटक बागमती प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइने ५० लाख रुपैयाँ तत्काल रोक्न माग गर्दै माओवादीले बिहीवारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
२.प्रेस चौतारी नेपालले उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीसहित तीन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा आज (बिहीवार) बसेको सचिवालय बैठकले हालै सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा अवाञ्छित र अनाधिकृत रुपमा अन्य पक्षसँग मिलेर सङ्गठनका मूलधारका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको जनाउँदै कारवाही गरेको हो ।
३.कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अति प्रभावित १४ वटा जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै १४ वटा जिल्लाका विद्यालयमा नजान विद्यार्थी तथा अभिभावकमा आग्रह गरेको हो ।
४.इटहरीका उमेशकुमार तामाङको टिम नयाँ वर्षलाई उल्लासमय मनाउन सिन्धुपाल्चोकको प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल भोटेचौर पुगे । त्यहाँ चियाबारी छ, ‘मिनि इलाम’ भनेर नाम कमाएको छ । तर त्यहाँ पुग्दा उनले सोचे जस्तो खुशी पाएनन् । बरु दुःख र दुर्व्यवहार मात्र सहनु पर्यो । ‘एभरेष्ट टि गार्डेन’ का कर्मचारीहरुले तामाङ र उनको टिमलाई चियाबारीको बाटो प्रयोग गरेकै कारण दुर्व्यवहार गरेका हुन् ।
५.नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन छुट्टै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीवारको बैठकमा पर्यटन बोर्डको योजना सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले मध्य पहाडी भूभागलाई हिल स्टेसनको रुपमा विकास गर्नका लागि ‘पर्यटन लगानी सम्मेलन’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
६.महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरी भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खोजतलास गरी सम्बन्धित सवारीधनीलाई जिम्मा लगाएको छ । महाशाखाले विभिन्न ठाउँबाट खोजतलास गरी बजरामद गरिएको १७ वटा मोटरसाइकल र ९ वटा स्कुटर बिहीवार (आज) सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो ।
७.प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेवारिसे शवको बायोमेट्रिक औंठाछाप र डिएनए नमुना सङ्कलन भएको एकिन भएपछि मात्रै शव व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीवार समितिको बैठकले अस्पतालमा रहेका बेवारिसे शवको विस्तृत विवरणसहित छुट्टै वेव पेज वा डोमेन बनाई सञ्चार माध्यमबाट बढीभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक शवको वायोमेट्रिक औँठा छाप र डिएनए नमुना सङ्कलन भएको एकिन भएपछि मात्रै शव व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हाे ।
८.नेपालमा थप पाँच सय ३४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार पाँच सय ८८ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा चार सय ९० र पाँच सय ६४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४४ जना गरी पाँच सय ३४ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
९.गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन माग गर्दै विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विपक्षी दलले विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन बुझाएका हुन् ।
१०.काठमाडौं र तनहुँमा पत्रकारमाथि भएका कुटपिट र दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल प्रेस युनियनले निन्दा गरेको छ । बुधबार बिहान तनहुँ, ब्यास–५ चापाघाटस्थित नेपाली सेनाको कालीभञ्जन गणका सहसेनानी विजय थापाले नियमित अभ्यासका क्रममा सडकमा दौडिरहेका सेनाका जवानको दृश्य खिचेको नाममा पत्रकार पवन पौडेलको क्यामेरा खोसेर दृश्य हटाउनाका साथै दुर्व्यवहार गरेको घटनाप्रति यूनियनले निन्दा गरेको हो ।
११.नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली नगर्ने पसल तथा कम्पनीमा ताला लगाएको छ । पटक पटक सुचना तथा माइकिङ गरेर प्लाजा खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि खाली नगरेका कम्पनी तथा पलसमा ट्रष्टले बिहीबार ताला लगाएको हो ।
१२.सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ वर्षसँगै विशेष रूपमा मनाइने बिसु पर्व यसपटक पनि मनाइएकाे छ। विशेष गरी यो पर्वमा परापूर्व कालमा हुने बालविवाहका कारण चेलीहरुले पाएको दु:ख र मर्मका बारेमा गीतबाट बिलौला गरेको बताइन्छ ।
१३.नेपाली भाषा साहित्यका विशिष्ट साधकका नाउँमा विद्यावारिधि शोध गर्ने एक जना विशिष्ट शोधार्थीलाई नइ प्रकाशनले पुरस्कार दिने भएको छ । नइ प्रकाशनले आफ्नो रजत महोत्सवका उपलक्ष्यमा एक जना विशिष्ट शोधार्थीलाई एक लाख रुपैयाँ राशिसहित नइ शोध पुरस्कार समर्पण गर्ने भएको हो ।
१४.गण्डकी प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक श्रेरचनले गत मध्यरातीनै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् ।
१५.कोरोना सङ्क्रमणका कारण पत्रकार कमल मिश्रकाे मृत्यु भएकाे छ । ४८ वर्षीय पत्रकार मिश्रको शुक्रराज ट्राफिल सरुवा रोग अस्पताल टेकूमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । विर्तामोड नगरपालिका–८ निवासी पत्रकार केही समयअघि भारतको धार्मिक कार्यक्रममा गएर फर्किनुभएको थियो । भारतबाट फर्किएलगत्तै बिरामी पर्नुभएका उहाँमा स्वाथ्य समस्या आएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
१६. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण राष्ट्रिय राजनीति बिग्रिएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएकाे पदप्रतिकाे तृष्णाका कारण राजनीतिमा समस्या देखिएकाे बताउनुभएकाे हाे ।
१७.यो वर्षको चौथो चौंरी महोत्सव बुधबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको पाँचथर जिल्लाको फालेलुङमा आयोजना गरिएको चाैरी महोत्सव बुधबार सकिएको हो ।
१८. टिपर दर्घटनामा २ जनाकाे ज्यान गएकाे छ । पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत रसुवा खण्डमा गए राति भएको टिपर दुर्घटनामा परी दुईको मृत्यु भएको हाे । मृत्यु हुनेमा रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका–१ ग्राङ निवासी ग्राङ प्राविका शिक्षक २७ वर्षीय राजेन्द्र तामाङ र २५ वर्षीय सवारी चालक सागर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
१९.नासु पदका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् । ‘माननीय ज्यू, नासुको आँसु देख्नुभएन ?’ को नारा लगाउँदै नायव सुब्बा पदका कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि भेला भएर प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।
२०. पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा २ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण भएको छ । एकैदिन २ लाख ७ सय ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । केही दिनदेखि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, एकैदिन एक हजारभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ। योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या १ करोड ४० लाख ७४ हजार २ सय ७४ पुगेको भारतको समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ।
२१. एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा चालककाे मृत्यु भएकाे छ । शिवसताक्षी नगरपालिका–११ काे पूर्वपश्चिम राजमार्गमा भएकाे एम्बुलेन्स दुर्घटनामा २० वर्षीय चालक उत्सव घिमिरेकाे मृत्यु भएकाे हाे । काठमाडौँको गोदावरीस्थित मेक्ससिटी अस्पतालबाट इलाम बिरामी पुर्याएर फर्किने क्रममा बा २१ च ७९८४ नम्बरकाे एम्बुलेन्स अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–७ बस्ने घिमिरेको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ ।
२२.गण्डकी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गएराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो । अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगिसकेको छ । आज साढे १० बजे अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना संसदमा आइपुगेको प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरूङले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु भएको हो ।
२३.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज इन्टरनेटबाटै घरजग्गाको नक्सा हेर्न र आफैं प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्थाको शुभारम्भ गर्नुहुने भएको छ । नापी विभागमा आज आयोजित औपचारिक समारोहबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्थाको शुभारम्भ गर्न लाग्नु भएको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि आफ्नो घर जग्गाको नक्सा प्रिन्ट गर्न र त्यसवाफतको शुल्क बुझाउन मालपोत कार्यालय धाइरहनु नपर्ने विभागले जनाएको छ ।